Mihomehy amin'ny fiainana miaraka amin'ny Filoha John | Solar Solve Marine
Ny fomba fijery sy ny hevitra navoaka tamin'ity solasolv.com Ny tranonkala dia ireo mpanoratra ary tsy voatery hisaintsaina ny politika ofisialy na ny toeran'ny Solar Solve Ltd. Ny votoaty atolotry ny mpitoraka bilaogy na mpanoratra antsika dia avy amin'ny heviny, ary tsy natao hampihenana ny fivavahana, ny lahy sy ny vavy, ny vondrona etika, ny klioba, fikambanana, orinasa, olona na olona na inona na inona.
Aza mametraka fanontaniana roa mihitsy amin'ny taratasy fandraharahana. Ny valiny dia hiresaka momba ilay olona tena tsy tianao ary tsy hilaza na inona na inona momba ilay iray hafa.
Nisy fantsom-pipoahana nipoaka tao amin'ny trano dokotera ka niantso plumber izy. Tonga ny plumber, namoaka ny fitaovana nampiasainy, nanao karazan-plumber mifono mistery nandritra ny fotoana kelikely ary nanolotra vola ho an'ny $ 600 tamin'ny dokotera.
Nihiaka ilay dokotera hoe: “Mampihomehy ity! Tsy dia manao dokotera akory aho! ”
Niandry ny hamonoana azy ny mpilalao plastika ary nilaza tamim-pahanginana hoe: "Izaho koa tsy nahay dokotera."
Ny fahafaha-manao dia mbola hijery lavitra kokoa noho ny fiaviany.
Rehefa misakafo any ivelany ny lehilahy 4, rehefa tonga ny faktiora dia handrotsaka £ 20 daholo izy ireo, na dia £ 32.50 fotsiny. Tsy misy amin'izy ireo no hanana na kely aza ary tsy hisy hanaiky ny faniriany hiverina.
Rehefa mahazo ny volavolan-dry zareo 4 ireo vehivavy ... .., tongava ny pocket calculators.
Ny andro tsara dia tsy hiposaka mihitsy raha ny marina rehetra.
Ny filazana fa tsy ho ela ianao dia hikarakara, tsy marina na dia mety aza.
Tsy ilaina ny mijery tsy mendrika ny kintana tsara anao ...
Ny asanao dia manandrana ary manao ny tsara indrindra amin'ny zavatra tahaka izao.
Amin'ny fotoana ahafahanao mihaona mivantana, dia manosika ny farany izy ireo.
Indraindray aho mihevitra fa ny famantarana lehibe indrindra dia misy fiainana manan-tsaina any an-toeran-kafa eto amin'izao tontolo izao fa tsy nisy nanandrana nanatona anay.
Ho an'ny hetsika tsirairay dia misy programa governemanta mitovy sy mifanohitra amin'ny governemanta.
Ny vehivavy dia manambady lehilahy iray izay manantena fa hiova fa tsy izy.
Lehilahy iray manambady vehivavy manantena fa tsy hiova ..., fa izy kosa.
Tsy dia mifanandrify amin'ny hadalana voajanahary ny tsindrin-tsakafo.
Rehefa mandalo amin'ny fiainana ianao dia maka fotoana iray isa-minitra ary avy eo hanome hevitra ny hafa.
Afaka mieritreritra zavatra izy!
"Tsy ny jeans manao ny mofonao ambany no matavy !!"
Ireo olona manondro ny tanany ary manontany ahy ny fotoana tena mampahatezitra ahy.
Fantatro ny toerana misy ny fijeriko, aiza ianao eto an-tany?
Manondro ny sombiko aho rehefa manontany hoe aiza ny efitra fandroana?
Fa maninona ny vehivavy sasany no mametraka roulam-bolo amin'ny volon'izy ireo alohan'ny hatory? Mifoha maraina ao anaty maraina.
Raha marina fa eto isika mba hanampiana ny hafa, dia inona marina moa ny hafa?
Nisy lehilahy iray niditra tao amin'ny fandidiana dokotera ary nametraka naoty teo ambony latabatra mba hamakian'ilay dokotera. Voalaza ao hoe: 'Tsy afaka miteny aho! Ampio aho!'
Nandohalika tamim-pahendrena ny dokotera ary nanome toromarika an-dralehilahy hametraka ny ankiben-tànany ambony latabatra. Manontany tena ianao hoe maninona, ilay lehilahy dia manery sy manao araka ny baikon'ny dokotera.
Vetivety dia naka boky lehibe ilay dokotera ary nasiany mafy ny ankihiben'io olona io araka izay vitany.
"AAAAAAAAAAAAAAAA !!!", mikiakiaka ilay lehilahy.
"Tsara, tsara", hoy ilay dokotera, "Andao rahampitso ary hiasa amin'ny 'B' izahay."
Antikom-pihetseham-po an-tsena antitra. Mividy entana sy mivarotra ny moana izahay.
Raha mahita zavatra tianao ianao, mividiana ny famatsiana mandritra ny androm-piainana, satria tsy hampitsahatra izany izy ireo.
Tohano ny rafitry ny antoko ... Tsy ampy ny fety iray isan-kerinandro !!
Nahoana ny olona no miteny hoe: "Any amin'ny toerana farany hajainao foana?"
Mazava ho azy fa izany.
Nahoana ianao no mijery foana rehefa mahita azy io?
Ny bileta dia mamakivaky ny lahatsoratra amin'ny avo roa heny amin'ny fanamarinana haingana.
"Vehivavy iray no nanosika ahy hisotro ...., Ary tsy mba nanana fahafahana velively aho hisaotra azy noho izany."
Raha toa ka mifanintona ny kiraro ............, alao tahaka ny iray hafa.
Ny HACKSAW dia iray amin'ny fianakaviana manana fitaovana fanapahana natsangana tamin'ny fitsipiky ny birao Ouija. Manova ny herin'ny olombelona ho lasa miolakolaka sy tsy ampoizina. Arakaraky ny andramanao hanan-kery eo amin'ny lalan-kalehany no hahaloto ny hoavinao.
Avy amin'ny tany ny lehilahy. Avy amin'ny tany ny vehivavy. Miatrehana izany.
Inona no antsoinao hoe trondro tsy misy maso?
Ny jiro dia zavatra efa notehirizina nandritra ny taona maro ary avy eo nariana andro 3 talohan'ny nilainao.
Ahoana no ahafantaranao raha misy mpandainga mandainga?
Mivezivezy ny molony.
Ny lehilahy mahomby dia iray izay manome vola bebe kokoa noho ny an'ny vadiny.
Ny vehivavy mahomby iray dia afaka mahita olona toy izany.
Inona no nolazain'ilay milina an-tsoratra tamin'ilay mpitan-tsoratra?
Afaka manisa ahy ianao.
Ny zavatra niainana dia zavatra mahafinaritra. Izy io dia ahafahanao mamantatra lesoka rehefa averina indray.
Amin'ny firy no tsy atahorana ny mijery saka mainty?
Raha mozika ianao.
“Tsy nilaza aho fa ianao no diso. Nilaza aho fa hanome anao izany. ”
Vehivavy iray manahy mikasika ny ho avy ... .., mandra-pahazoany vady.
Ny lehilahy dia tsy manahy na oviana na oviana momba ny ho avy ... .., mandra-pahalehibeny.
Aza manahy ny hevitry ny olona, ​​tsy manao izany matetika izy ireo.
Vehivavy iray nandeha an-tongotra teo amin'ny lehilahy iray antitra kely nikopaka teo amin'ny seza teo amin'ny lapa.
"Tsy vitako ny nanamarika ny hafalianao nahita azy.", Hoy izy.
"Inona no miafinao mandritra ny fiainanao sambatra?"
"Mamono sigara sigara 3 isan'andro aho.", Hoy izy.
"Misotro zava-pisotro amin'ny herinandro ihany aho, mihinana sakafo matsiro ary tsy mampiasa mihitsy."
“Mahagaga izany.”, Hoy ilay vehivavy. "Firy taona ianao?"
"Enin-jato.", Hoy izy.
FIVORIANA PSYCHIC HATAO ETO. Ny mpikambana dia tokony ho afaka maminavina ny daty sy ora.
Rehefa miambina ianao dia mampianatra anao foana izy ireo hanao fanamby olona manatona anao ao anaty haizina amin'ny fihazonana ny basim-borona ary miteny hoe: “Halt! Iza no mandeha any, namana na fahavalo? ”
Raha hoy izy ireo hoe, "Ry sakaiza.", Hoy ianao, "Mandehana namana."
Niambina aho rehefa maizina be ary henoko ny dian-tongotra. "Mandringa! Iza no mandeha any, namana na fahavalo? ”
Nisy feo namaly hoe, "Foe."
Hoy aho hoe, "Fa maninona ianao?"
Hoy izy hoe, "Enina enina ny tongotra."
Hoy aho hoe: “Mandehana fahavalo.” Tommy Cooper
Rehefa mihalehibe ianao, rehefa lavo ianao, dia manontany tena hoe inona koa no azonao atao raha mbola eo ianao.
Inona no antsoinao hoe gorila misy akondro isaky ny sofina? Izay tianao rehetra satria tsy maheno anao.
Mpisolovava 2 no mitsangatsangana an-tendrombohitra rehefa mahita liona an-tendrombohitra saika hanafika azy ireo. Ny mpisolovava voalohany dia nanala ny kitapony ary vonona hihazakazaka. Ilay mpisolovava faharoa dia nilaza hoe: “Adala ianao, tsy afa-manoatra ny saka.” Namaly ilay mpisolovava voalohany: “Tsy mila mihoatra ny saka aho. Mila mandingana anao fotsiny aho. ”
Vehivavy miantso ny vadiny any am-piasana. "Miala tsiny aho fa afaka miasa any an-tsaiko anio.", Hoy izy.
"Nahazo vaovao tsara sy vaovao ratsy ho anao ry zareo," hoy izy.
"OK mankafy, fa satria tsy manam-potoana izao aho, dia omeo ahy ny vaovao mahafaly."
"Eny, miasa ny kitapo air ...".
“Tsy te-ho tonga tsy mety maty amin'ny asako aho. Te ho tonga tsy mety maty aho amin'ny tsy fahafatesako. ” Woody Allen